Igbo, Tracts, UZI NKE 01 -- Ị Maara Jisoz? | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 01 (Do You Know Jesus?)
UZI NKE 1 - Ị Maara Jisoz?
Onye ọ bụla nke na-atụgharị uche n'akụkọ ihe mere eme nwere ike ịchọta ndị ndú pụrụ iche n'oge ọgbọ, bụ ndị metụrụlarị anya ma mee ka mba ha. Onye dị otú ahụ bụ Jizọs, nwa Meri. Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị bi n'ụwa na-agbaso ozizi ya. Aha Jisoz bu okwu kachasi ike nime agba ohu, nke putara ugboro iri ise na iri ise na akwukwo iri abuo na asaa.
Mmụọ ozi Gebriel sitere na Chineke zigara Virgin Mary. Ya mere otu mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gosipụtara Josef, di Mary, na nrọ. A gwara ha na nwa nwoke a tụụrụ ime na Meri bụ nke Mmụọ Nsọ, nakwa na ha ga-akpọ ya "Jizọs, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie nile ha" (Matiu 1:20-23; Luk 1:31).
Aha a abugh mmadu, kama obu uche Chineke. Na aha "Jisoz," bu atumatu nke Chineke maka nzoputa mmadu, uzo eburu uzo tupu akuku nke uwa. Aha Jisoz putara n'uzo putara, "Onye nke ogbugba ndu ahu na enyere ma zoputa".
Chineke gbanwere usoro nke ụwa site n'aka Jizọs onye Nazaret. Nwa nke Meri ekwugh ihe nkuzi efu nke madu, obugh nani na o mere ihe ebube di iche iche, ma site na ya, Chineke kwuru okwu ya (Jon 5:19-21; 14:10-24). Gịnị bụ nzube nke ọbịbịa ya? Gịnịkwa bụ ihe nzuzo nke ike ya dị ukwuu?
Ọ na-eme ka anyị ghara ịdị mpako
Jisoz kwuru, "Biakutem, unu nile ndi n'luolu na ndi di arọ di arọ, m'gēme kwa ka unu zuru ike ... n'muta ihe n'aka m: n'ihi na mu onwem bu onye di nway na onye wedara ala n'obi, unu gnokwa izu ike nye nkpuru-obi-unu" (Matiu 11:28-29). Ndị niile na-agba mbọ ịchịkwa ndụ ha na-agba ume ịbịakwute Jizọs. Onye ọ bụla nke na-abịakwute ya, Jizọs ga-anapụta onye dị otú a site na nganga ma nye ya ezumike.
Jisoz kwuru, "Nwa nke madu abiaghi ije ozi, kama ka O jee ozi, ka O nye kwa ndu Ya kao buru ihe mgbap uta nye otutu madu" (Matiu 20:28). Ndị na-eso Jizọs na-agwọta ọdịmma onwe ha ma jiri ọṅụ na-ejere ndị ọzọ ozi n'ike ya.
Ọ na-anapụta n'aka iwe Chineke
Iwe nke Onye Nsọ na-adakwasị ndị niile mehiere, mana Jizọs na-anapụta ndị kwere na Ya site na ikpe ọ bụla n'ụbọchị Mbilite n'Ọnwụ (Jọn 3:18; 5:24). Onyenwe anyi kpugheere Ezisaia onyeam ma eziokwu a, "ghaghi ime ka bê ihe anyé bêrê, buru kwa ihe-nhuta-obi-ayi; ma anyị ji ya kpọrọ ihe, nke Chineke tib͕uru, ma mesie anyị ike. Ma o merụrụ ya n'ihi mmebi iwu anyị, e merụrụ ya n'ihi ajọ omume anyị; ọbịbịa maka udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa site n'ọnyá ya ka a gwọọ anyị. Ihe niile anyi huru dika aturu si akpafu; anyị atụgharịwo, onye ọ bụla, n'ụzọ ya; ma Onyenwe anyi dakwasiwo ya aj omume nke anyi niile" (Aisaia 53:4-6).
Tupu Jizọs anwụọ, o kpere ekpere ka Chineke rịọchitere ndị iro ya: "Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme" (Luk 23:34). Anyị ji n'aka na Chineke zara ekpere ebere ya.
Ọ na-anapụ anyị mmehie
Jisoz kwuru, "Onye obula nke nmehie bu orù nke nmehie ... Ya mere, oburu na okpara unu ka unu nwere onwe-unu, unu gbu ndi nwere onwe-unu n'ezie" (Jon 8:34, 36). Jizọs na-anapụta ndị tụkwasịrị ya obi n'ụlọ mkpọrọ nke mmehie. O weere onwe ya mmehie nke ụwa wee kpuchie anyị. Ya mkpuchi ekpuchipu ajọ omume anyị nile, Mmụọ Nsọ ya bi n'ime anyị ma wusi anyị ike imeri mmehie (Ndị Rom 8: 9-11). Ya mere, onye na-ekwere na Jizọs na mkpuchi mmehie ya ga-eme ka o doo anya.
Ọ bụ onye meriri onye ọjọọ ahụ
Jisos meriri Setan, guzosie ike megide ya ma ghara ikwenye onwunwa ya (Matiu 4:1-11; Luk 4:1-13). Site na nsogbu na mkpagbu, Jizọs nọgidere na-etinye onwe ya nye Chineke wee nọgide n'enweghị mmehie. Onye ọjọọ ahụ enweghị ike ịchịkwa ya. Jizọs chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ na mmụọ ọjọọ ndị mmụọ ọjọọ ahụ nwere. Ọ nyere ndị na-eso ụzọ ya ikike a (Luk 9:1). Onye ọ bụla nke na-anakwere mkpuchi mmehie ya ga-enwere onwe ya kpam pụọ n'ike nke Setan
Ọ bụ Onye na-emeri ọnwụ
Jisoz kwuru, "Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu. Onye kwere na m, ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịnwụ, ọ ga-adị ndụ. Onye ọ bụla nke na-adị ndụ (na mmụọ) ma na-ekwere na m ga-anwụ anwụ. Ì kwere nke a?"(Jọn 11:25-26).
Jisoz biliri na ndi nwuru anwu bilie, puta n'anu aru ma gwa ndi neso uzo ya okwu; ha metụrụ ya aka. N'otu aka ahụ, Jisọz nwere ike ịnapụta ndị na-eso ụzọ ya n'ọnwụ wee nye ha ndụ ebighị ebi.
Ọ bụ Onye Ngwọta site na ịkpọasị na ịbọ ọbọ
Jizọs nyere ndị na - ege ya ntị iwu, sị, "Hụ ndị iro unu n'anya, gọzie ndị na - akọcha unu, merenụ ndị kpọrọ unu asị asị, kpeekwanụ ekpere maka ndị ji obi ọjọọ na - eme unu ma na - akpagbu unu, ka unu wee bụrụ ụmụ nke nna unu nọ n'eluigwe" (Matiu 5:44-45; Luk 6:27-28).
Nanị onye amuru site na mmuo nke Chineke, gbaghaara ndi naeso ya nmehie nile ha ma nye ha iwu ka ha gbaghara ndi nile mehiere megide ha. Ebumnobi nke mgbaghara Jizọs bụ ịhụnanya dị ukwuu. Jizọs na-anapụta ndị nile na-erube isi na ya, na ịkpọasị na ịbọ ọbọ.
Ajuju nke nwa nke Meri ka ndi nke ya kpasuru. Mana n'agbanyeghi na ha juru ha, Jisoz nyere ha uzo, udo, mgbaputa na ike. Onye nile nke chighariri na nmehie ma chigharia nye ya ka agu n'onye ezi omume na inweta ndu ebighebi.
Jizọs dị ndụ na-akpọ gị òkù ịtụkwasị ya obi na ịnakwere okwu ya. O nwere ike inye gị ike nke Mmụọ Nsọ wee mee ka mmụọ, mkpụrụ obi na ahụ gị dị ọcha. Ekwela ka obi gi sie ike, kama wepuo mgbaghara na ike ya ma gbanahụ iwe ahu. Jisoz bu onye mgbaputa gi, onye nzoputa, onye ojuju na onye ogbugbo n'iru Chineke. Ọ bụ ndụ gị ma mee ka nchekwa gị dị. Gaa n'ihu ma tinye aka gị n'atị aka ya ka i wee nweta amara na amara nke njupụta ya (Jọn 1:16).
Soro anyi ekpere: "Onyenwe anyi Jisoz, Gi onwe gi bu Onye nzoputa nke uwa na Onye nzoputa m. Ị napụtara m iwe na ikpe Chineke. I zoputara m na nganga m na ịchọ ọdịmma onwe onye. Na-eme ka m dị ọcha site na mmehie m ma nye m ndụ gị dị ọcha na ezi omume nke eluigwe, ka onye ọjọọ wee ghara ịchọta ikem. Nabata mdị ka otu n'ime ndị na-eso ụzọ gị ma mee ka m ghọta ihe ịkụziri na iwu gị. Ka ike gi biri n'adighi ikem, ka mwee nye Chineke di nsọ otuto na ndu m. Amen."
Ị ga-achọ ịmatakwu banyere Jizọs, nwa nke Meri?
Anyị dị njikere iziga gị n'efu, mgbe ị rịọrọ gị, Oziọma Kraịst na mkparịta ụka nkọwa.
Kesaa ozi ọma Jizọs na mpaghara gị
Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ a metụrụ gị aka ma nweta ume na nkasi obi na ya, kesara ya na ndị enyi gị na ndị agbata obi gị. Anyị ga-enwe obi ụtọ iziga gị nọmba ole na ole nke ya. K'anyị mara ọnụọgụgụ nke ị ga-ekesa na-enweghị nsogbu na onwe gị.
Na-echere akwụkwọ ozi gị, anyị na-ekpe ekpere maka gị na Onyenwe anyị dị ndụ ga-agọzi gị. Echefukwala ide, n'ụzọ doro anya, adreesị zuru ezu gị.
Page last modified on October 01, 2018, at 02:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)